Astaamaha magaalo casri ah qarnigii XNUMXaad | Cusbooneysiinta Cagaaran
Adrian | | Tamarta dib loo cusboonaysiin karo, Deegaanka
ka magaalooyinka Waa goobo isbeddello lagu sameeyo iyadoo loo eegayo hababka kala duwan ee iyaga ka dhaca, habka ay beeshoodu u abaabulan tahay iyo waqtiga ka dib.
¿Waa maxay magaalo casri ah sida? Waa maxay shuruudaha ay tahay inay lahaato si ay u qanciso baahiyaha adeegsadayaasha isla markaana ay saaxiibtinimo ugu yeeshaan deegaanka? Aan aragno xiga:
Astaamaha magaalo casri ah qarnigii XNUMX-aad
Maanta waxaa jira u janjeera in la casriyeeyo magaalooyinka, laakiin si loo gaaro ujeedkaan, dhinacyada aasaasiga ah qaarkood waa in lagu xisaabtamo oo kala sooca magaalada. magaalo casri ah kuwa dib u dhaca ah sida:
Dib-u-eegis iyo haddii loo baahdo la beddelo qaabka abaabulka iyo adeegsiga geyiga magaalooyinka.
U fidinta adeegyada bulshada guud ahaan bulshada sida biyaha la cabbo, bulaacada, koronto, internetka, gaaska, iyo kuwo kale.
Kor u qaad dhismooyinka deegaanka dhismayaasha cusub ama guryaha sidoo kale dib u habeyn lagu sameeyo ama dib loo soo celiyo kuwii hore si looga dhigo kuwo waara.
Shaxda tamarta waa in la qorsheeyaa iyada oo ku saleysan tamar dib loo cusbooneysiin karo taasina waa mid kaladuwan. Waxaa intaa dheer kor u qaadista isticmaalka nadiifi tamarta labadaba qaab gudaha ah laakiin sidoo kale isticmaalka warshadaha.
Badbaadinta meelaha cagaaran waa in kor loo qaadaa oo fidintooda la kordhiyo haddii ay yar tahay.
Maal gasho oo horumariso xeelado loogu talagalay socodka waara magaalooyinka iyo kor u qaadista iyo horumarinta gaadiidka dadweynaha, baaskiiladaha iyo hababka kale ee deegaanka.
Mudnaan siinta adeegsiga tikniyoolajiyadda cagaaran iyo tamarta.
Dhiirrigelinta keydinta tamarta iyo adeegsiga caqliga leh ee tamarta dhammaan magaalooyinka.
Ku baro arrimaha deegaanka waxbarashada rasmiga ah iyo tan rasmiga ah ee ku saabsan sida loo daryeelo deegaanka iyo qaababka isticmaalka waa in wax laga beddelaa.
Horumarinta barnaamijyada socda ee dib u samaynta noocyadiisa kala duwan.
Inay fuliyaan ficilo iyo siyaasado yareeya sinaan la’aanta bulshada iyo saboolnimada.
Kuwani waa dhinacyada ugu muhiimsan ee lagu xisaabtamo si loo gaaro a magaalada casriga ah ee qarnigii XNUMXaad.
Waxaa jira magaalooyin badan oo ku dadaalaya sidii ay ku gaari lahaayeen, laakiin kuwa kale ayaa aad uga dambeeya, taas oo u baahan go'aan siyaasadeed oo ballaaran iyo cadaadis ka yimaada muwaadiniinta si loo gaaro.
Waa caqabad u rogo xarun magaalo oo magaalo casri ah iyadoo leh xaalado nololeed oo wanaagsan oo loogu talagalay dadka ilaaliya deegaanka isla markaana ilaaliya kheyraadkiisa jiilalka soo socda.
Miyaad ku dari doontaa wax dhibco dheeraad ah liiska sifooyinka ay tahay inay magaalo casri ah yeelato?
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Magaalada casriga ah